Ulungelelaniso olungcono ngeKontrakthi yokuziphatha
Ootitshala Ulawulo lokuziphatha
Ikhontrakthi yeZenzo zokuPhucula ukuPhucula umPhumo woMfundi ocelomngeni
Abanye abafundi bafuna isakhiwo esongezelelweyo kunye nenkxaso
Iklasi ngalinye linabantwana abancinci abadinga ingqalelo encinane. Oku kubakho kuba baphazamisa utitshala okanye abanye abafundi okanye nje kunzima ukuba baphathe. Kungakhathaliseki ukuba kunjalo, ootitshala baye bafumana oonxibelelwano bokuziphatha ukuba yindlela efanelekileyo yokufikelela ezi ntlobo zabafundi. Nazi ezinye iingcebiso ezikhawulezayo zokusebenzisa iikontrakthi zokuziphatha eklasini lakho kunye nomzekelo wendlela onokwenza ngayo eyakho.
Iingcebiso zokusebenzisa iikontrakthi zokuziphatha
Nazi izicwangciso ezi-3 zokuphumeza iikontraki zokuziphatha eklasini lakho. Qinisekisa ukuba ulandela nganye yezi zicwangciso ukuqinisekisa ukuba isivumelwano siyimpumelelo.
Zigcine zilula - Hlanganisa isivumelwano kunye nokuba kulula kwaye kulula ukuba umntwana afunde. Qinisekisa ukuba icacile kwaye icacise kwaye umfundi angayiqonda ngokulula.
Beka Iinjongo ezifikelelekayo - Qinisekisa ukuba iinjongo zilula ukuba umfundi afinyelele. Kulula ukuba umnqweno uthenge umkhontrakthi.
Yibambisana - Kubalulekile ukuba uhambelana nesivumelwano. Ukuba umfundi ubona ukuba awukho, ngoko baya kucinga ukuba banokungahambi kakuhle nokuziphatha okungafanelekanga, kwaye yinto yokugqibela oyifunayo.
Indlela yokudala iKontrakthi yokuziphatha
[Igama lomfundi] liya kubonisa ukuziphatha okulungileyo rhoqo ngosuku esikolweni.
[Igama lomfundi] kulindeleke ukuba lilandele umyalelo wesititshala okokuqala ecela ukuba enze into ethile. Ukulindeleke ukuba enze ngokukhawuleza kunye nesimo esihle sengqondo . Ngamanye amaxesha [igama lomfundi] alidibana naloo milindelo, uya kufumana amanqaku kumhla kwiphepha lokulandelela.
La magama amanqaku aya kugqiba imivuzo kunye nemiphumo [igama lomfundi] elifumanayo, njengoko kuboniswe ngezantsi.
Zet talente ngelinye ilanga = Ikhefu lokuxhoma ukufa emva kwesikolo ngomnye wembuyekezo echazwe ngezantsi
Omnye umzuzu ngosuku = Awufumani ithuba lokugubha ukufa ngaloo mini
Amabini okanye ngaphezulu kweetalente ngosuku olunye = Ukulahleka kwexesha elilandelayo kunye / okanye neminye imiphumo njengoko kuchazwe nguMnu Lewis
(inombolo ehlanganiswe ekufeni)
1 = Enye yetafile yetafile yakhe
2 = Ithekiti enye yokukratshi yokudweba kwikhosi yenyanga
3 = Elinye i-candy
4 = Ufumana ukuba ngowokuqala kumgca wosuku lwesikolo esilandelayo
5 = Ufumana ukunceda utitshala emva kwesikolo ngaloo mva
6 = Amabhuleki amahlanu kwiiglasi zeemabula zeklasi
Siyavumelana nemimiselo yale khontrakthi yokuziphatha njengoko ichazwe ngasentla.
Ehlelwe ngu: Janelle Cox
Izizathu ezi-8 eziPhezulu ezingekhoyo ootitshala abanakuyayiqonda kakuhle uYobhi wethu
Iingcebiso zokugqoka njengoMfundisi oyiNtloko
I-Newsletter yeVeki yoNxibelelwano yabazali
Ukuzisa iMigaqo Yakho YesiKlasi
I-9 yamahhala kunye neCandelo leMigangatho yokuBala abafundi
I-Excellent 11 nguRon Clark
Isiphi Isipho Sakho Esikhuthazayo?
Ieholide zeFebhuwari, iintsuku ezikhethekileyo kunye neZenzo
Iingoma ezili-10 eziphezulu malunga nokutyelela
UMichael Phelps, u-Olympian ophezulu kunye noMoya oPhezulu kunabo bonke ixesha
I-Algebra Iingxaki zeLizwi: Imibuzo yobudala
Izibhengezo zobuqu kwiJapan
Ingcwele nini uLwesine?
IMollusca - iPhylum Mollusca
Imvume yokuThuthukiswa kwamazwe ngamaKhanadi
12 Iimpapasho zeWebhu eziMnandi ezenza ngathi i-LOL ngo-2015
I-Electron Pair Repulsion Inkcazo
Imfazwe yaseColombia-Peru yase-1932
Iintlobo ezili-10 zokuThumela iintlobo zeeMiphumo eziVakalayo eLwimi
13 Iingcaphuno zokwabelana noYihlo lolo suku
Ukuqonda Inkcazo yePlankton
Ubume be-Geographic Overview ye-Rust Belt
Ukufunda kwehlobo: I-Witchy Fiction